भीमसेन सापकोटा (आचार्य राजन शर्मा)
आफ्नो उद्दारको लागि स्वयंमा निर्भर रहनुपर्दछ, अन्यमा होइन । हजारौं युद्धहरू जित्नुभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, आफैलाई चिन्नु । हामी जे सोच्दछौ उही बन्दछौँ । हर गल्ती र प्रगति मनबाटै हुन्छ । तर, गल्ती नै सर्वश्व होइन अपितु गल्ती त्यसले मात्रै गर्छ, जसले नयाँ सिर्जनाका लागि आफैंलाई परीक्षणको भट्टीमा हाल्न तयार हुन्छ । त्यसैले तपाईंहरूले पनि आजैका दिनदेखि गल्ती गर्न सुरु गर्नुस् । जब गल्ती गरेको थाहा हुन्छ, त्यसलाई सच्याउनुस् । गल्ती जीवनको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो । गल्ती प्रगतिको सूचक हो । गल्ती गर्नु कुनै गल्ती होइन । तर, गल्तीदेखि पाठ नसिक्नु गल्ती हो । जिन्दगी परिवर्तन हुन वर्षौं लाग्ला तर सोच एक मिनेटमै परिवर्तन हुन सक्छ । तसर्थ, सोच परिवर्तनका लगि अरू कोही होइन तपाईं स्वयम् जिम्मेबार बन्न सक्नु हुन्छ । सर्वदा सत्यमार्गमा हिड्ने व्यक्तिको बाहृय र भित्री दुवै उन्नतीको द्धार खुल्दछ ।
एकदिन यमराजले मर्ने मानिसको सूची देखाउँदै एउटा मानिसलाई भने,‘तिम्रो आज अन्तिम दिन हो’, यो सुचिमा तिम्रो नाम एक नम्बरमा छ ।’
त्यो मानिस मृत्युको डरले आत्तियो र यमराजलाई भन्यो के म यमराज संँग बसेर १ कप चिया पिउन सक्छु ? यमराजले भने,‘ अवश्य !! मानिसले चियामा निन्द्राको ट्याबलेट मिलाएर यमराजलाई दियो !! यमराजले चिया पिएर गहिरो निन्द्रामा मस्त सुते, त्यही मौका छोपेर त्यो मानिसले आफ्नो नाम मेटेर सूचिको अन्तिममा लगेर राख्यो ! । जब यमराजको निद्रा खुल्यो, मस्त निन्द्रा र चियाले प्रफुल्ल भएर यमराजले भने,‘तिमीले मलाई चिया पिलाएर धेरै खुसी गर्यौ, यो सुची म अब अन्तिमबाट शुरु गर्छु, कथाको सन्देश – भाग्यको खेल बदल्न त्यति सजिलो छैन !! सकारात्मक शब्द यति शक्तिशाली हुन्छ कि दुखाइको बखत कडा ‘दुःखाई नाशक औषधी जस्तै ।
संसारमा सबै औषधी त किन्न पाईन्छ तर मनको दुःख मेट्ने औषधी कुनै शहरमा पनि भेटिन्न । यही औषधी नभेटेर अस्ट्रेलियाको एक धनी व्यक्ति जसको आफ्नै नीजि विमान थियो, उनले केही समय अघि आत्महत्य गरे आफ्नै अलिशान महलमा । महलले दुःखको मलम दिँदैन तर, झुपडी र खुला आकाशको बास नै किन नहोस् उसँग संसारलाई हेर्ने र बुझ्ने सकारात्मक दृष्टि छ भने हरदिन उसका लागि प्रकृतिको उपहार बन्छन् । मानिस उपलब्धीमा मातिन्छ र त्यसैले दुःख तर्फ डोर्याउँछ ।
त्यसैले पाएर दुःख हुनुभन्दा जीवनलाई बुझ्दै गुमाउँदा पनि सुखी र आनन्दित हुन सक्नु नै मिठो जीवन हो । यदि तपार्इँ पनि कतै दुख्नु भएको छ भने यी १० आनन्दका र सन्तुष्टिका सकारात्मक क्याप्सुल लिनुहोस् ।
१. जब आपत पर्छ सम्झनु अग्नि परिक्षा हुंदैछ । स्कुलको परीक्षा जस्तो सजिलो हुँदैन जिन्दगीको परीक्षा । घोकेर हैन सोचेर हल गर्नुपर्छ ।
२. दुःख भन्ने चिज सबैलाई पर्छ, तर जो दुःखमा पनि मन सम्हालेर खुसी हुन खोज्छ र सक्छ त्यो जिन्दगिमा कहिलै दुःखी हुनु पर्दैन ।
३. समय एउटा यस्तो इमान्दार वस्तु हो ,जो पर्खाउन लगाएर कहिल्यै धोका दिदैन । एकदिन अवश्य आउँछ ।
४.जीवन पनि एक बगैंचा हो । कहिले शरद जस्तै फूल फुल्छ, कहिले वसन्त झैँ हरियाली हुन्छ, त कहिले शिशिर झै ओइलिन्छ । अनि कहिले ग्रीष्म झैँ खडेरी को चपेटामा पर्छ ।
५. खुशिको एउटा ढोका जब बन्द हुन्छ अर्को ढोका खुलेको हुन्छ तर अक्सर हामी बन्द ढोकातिर यति धेरै हेर्छौ कि खुलेको ढोकातिर हाम्रो आँखा कहिले जाँदैन । धैर्य गर्नुहोस्, नयाँ ढोका भेटिने छ ।
६.आत्मियताको अँगालो मारेर अंगालो पछाडि छुरा घोप्नेहरूको पनि कमी छैन यहाँ ? तर, पछाडिन कुरा काट्नेको स्थान पनि पछाडी नै छ, अगाडि आउने हिम्मत उनीहरूमा कहिल्यै हुँदैन ।
७. मृत्यु मानिससँग जन्मेदेखि नै पाहुना लागेर बस्छ र उ आयुलाई पनि आफुसँगै लिएर मात्रै फर्कन्छ ।उ सँगै बसुन्जेल बाँचिन्छ।जब फर्कन्छ, जीवन सकिन्छ। मृत्युमात्रै जीवनको अन्तिम सत्य हो, अरु सब भ्रम हुन्। बाँच्दा जतिसुकै शक्तिशाली छु भनेर घमण्ड गरेर अरुलाई तर्साएपनि स्वास र दिन सकिएपछी त्यो खोक्रो शरिरले केही गर्न सक्दैन । मृत्युको साश्वत सत्यलाई सदैव ख्याल गरौं ।
८. मिहिनेत सिढी जस्तै हुन्छ, अनि भाग्य लिफ्ट जस्तै । कुनै पनी समय लिफ्ट बन्द हुन सक्छ तर सिढी जहिले पनी खुल्ला हुन्छ र उचाई को तर्फ लैजान्छ ।
९ समस्या जब जब आउंछ उ एक्लै आउँदैन लावा लस्कर सहित आउँछ । जीवन एउटा पहाडको सडकमा मोटर चलाए जस्तै हो, अस्ट्रेलियाको चिल्ला सडकमा कार चलाए जस्तो मात्र जीवन होईन , त्यसैले यात्रा हो उतारचढाव त आईरहन्छ. . त्यसैले आरामसँग यात्रा गर्नुस . .गियर बदल्दै ,बदल्दै ।
१० जे हुनु छ हुन्छ नै । भएका कुरामा पछुताएर रुनु छैन । बरु सिक्नु छ र जिउनु छ । जिन्दगीमा सकिन्छ भने केही राम्रो काम गरौं !!
कम्तीमा ‘चार’ जना ‘मलामी’ चैं कमाउन सकियोस् जसले आर्यघाट सम्म पुर्याई दुई थोपा आँसु झार्दिउन् । कोफिन र कात्रो खोजिदिने मान्छेको अभाव हुन नपाओस् ।
सत्य सन्तुष्टि र खुशी को लागि सधै सकारात्मक बनौं । सत्य सन्तुष्टि र खुशी को लागि सधै सकारात्मक बनौं । त्यसैले वेद वाक्य बोल्छः
मया सन्तुष्तमानसः सर्वाः सुखमया दिशाः।।
शान्त मनको अभ्यास कर्ता ,सन्तोषि र आफ्नो भन्दा अरूको लागि निस्वार्थ रहने मान्छे लाई दश दिशाबाट सुख प्राप्त हुन्छ । तपाईं अस्ट्रेलिया, नेपाल वा विश्वको जुन भुमिमा रहे पनि तपाईं तपाईंकै सकारात्मक भावको रहनुस् । अरूले देखाईदिने आफु होइन , आँफैले बन्न चाहेको आफु बन्ने प्रयास गर्नुहोस् । यसका लागि , शाकाहार भोजन , सुद्द सोच , यौगिक अभ्यास र असल संगततर्फ लागौं । खुसीलाई तपाईंंले खोज्नु पर्दैन, खुसी आँफै तपाईंलाई खोज्दै दैलोमा आइपुग्ने छ ।